Tagsiile nafta looga qaaday inta baabuur laga lulay dhulka loogu jiiday(VIDEO+SAWIRO) – SBC
Tagsiile nafta looga qaaday inta baabuur laga lulay dhulka loogu jiiday(VIDEO+SAWIRO)
Posted by editor on Maarso 1, 2013 Comments
Sideed ka mid ah ciidamada Booliiska dalka Koonfur Afrika ayaa xabsiga la dhigay, iyagoo lagu eedeynayo dil, waxaana tani ka dambeysay ka gadaal markii ay dileen Mido Macia oo 27 sano jjir ah ninkaasi oo ahaa magangalyo done u dhashay wadanka Mozambic kaasi oo ay u dileen si silic iyo saxariir ah.
Mido Macia wuxuu ku noolaa deegaanka Daveyton oo ka tirsan degmada Ekurhuleni oo ka mid ah gobolka Gauteng, waxaana uu ku shaqeysan jirin baabuur Tagsi (taxi) oo naftiisa iyo reerkiisa ku quudin jirey.
Laba maalin ka hor ayuu baabuurkiisa Mido wuxuu dhigay meel aan habooneyn waxaana u yimid ciidamo Booliis ah kuwaasi oo ku amtay in uu gaariga ka leexiyo goobta uu dhigay, waxaase dhashay muran iyo faro isku taag taag isku badalay geeri naxdin leh.
Booliiska oo ka carooday muranka ninkan la soo istaagay ayaa isku dayey inay ninkaasi xiraan oo ay saaraan baabuur ay wareen hase yeeshee taasi waxay ku noqotey mid aad culus ka dib markii Mido uu ka biyo diiday in uu ogolaanshihiisa ku raaco baabuurka Booliiska, waxaana arintaasi ay dhalisay in Booliisku ay xoog ninkaasi ku saaran gaariga, laakiin xaaladu ma noqon mid sahlan.
Tiro ciidamada Booliiska ka mid ah ayaa ninkii isku hilay iyagoo garaacis iyo qoorqabasho isagu daray, laakiin xaalku wuu noqon waayey mid sahlan waayo ninkaasi wuxuu isku darey haraato iyo fargasho uu ku doonayo in uu Booliiska iska baaciyo, ilaa ay ku soo biireen raxan kale oo ciidamo Booliis ah waxaana markii dambe u suurtagashay nimankii Booliiska ahaa inay ninkii qoorta ka qabtaan oo ay dadaamiyaan.
Fiicnaan laheydaa inay gaariga saaraan, arxan iyo damiir la’aan ay qabaan Booliiskaasi waxay ninkii xaga dambe uga xireen gaarigii ay wateen iyagoo gacmaha ka xiray kuna xiriiray xaga dmabe ee gaariga iyagoo jiidanaya goobtii ka dhaqaaqay si ay u geeyaan saldhiga Booliiska iyagoo ninkii ku jiidaya dhulka.
“Ileyn talo isuma kaa sheegto” Ma naxayaashii Booliiskaa ahaa caqli yari iyo kibir tu ay tahayba iyagoo gaarigii ninkii ku jiidaya ayay goobtii ka dhaqaaqdey, waxayna la aheyd inay sameeyeen falkii ugu wanaagsanaa, laakiin sidaasi ma aheyne ninkii oo qaba dhaawac ba’an sidii laamiga ay ugu sii jiidayeen ayay ku tureen xabsiga Saldhiga, halkaasi oo goor dambe Mido ay naftii kaga baxdey.
Kala carar iyo maxaa sidaasi loo sameeyey ayaa meeshii ka bilowdey faraha ayaa la isku taagtaagay, laakiin wixii dhacayba waa dhaceen dadkii arinkaasi ka dambeeyeyna toosh ayaa lagu ifiyey, sheekadiina waxay ku faaftey wadanka South Africa oo dhan iyo guud ahaan caalamka ka dib markii warbaabintu ay si weyn warkaasi u qaad qaaday.
Wargeyska The Daily Sun ee dalkaasi ka soo baxa oo dhacdadan markii ugu horeysay baahiyey wuxuu helay Video lagu duubay Mobile xiligii ay Booliisku ninkaasi inay wadaan la xarbinayeen, waxaana muuqaalkaasi markii laga baahiyey Telefishinada, lana galiyey baraha Internet-ka uu noqdey mid wajigabax iyo ceeb ku noqdey dawlada Koonfur Afrika taasi oo qaylo dhaan ba’an ka keentey qolayaha u doda xuquuqda Aadmiga, waxaana ay arintii keentey in 8 askari oo dhacdadan ka dambeeyey xabsiga la dhigo si maxkamad loo soo taago iyagoo lagu qaadayo dambiga ay geysteen ee cawaaqibxumada geerida sababay.
General Riah Phiyega oo ka mid ah saraakiisha Booliiska Koonfur Afrika waxay sheegtey inay si buuxda u taageerayaan in la sameeyo baaritaan dhameystiran oo buuxa, iyadoo hadalkeeda raacisay in ninkaasi xuquuqdsiisii si ba’an loogu gaboodfalay.
Saraakiil Booliiska ka tirsan waxay dhankooda ku andacoodeen in Mr Marcia uu halis galiyey nolasha mid ka mid ah ciidamadii Booliiska isagoo ka qaatey qorigiisii.
Tani waa dhacdadii labaad ee mudo 10 bilood gudahood soo food saarta ciidamada Boolisika Koonfur Afrika, iyadoo ay ka horeysay fadeexo fool xun oo sababtey dhimashada 34 qof oo ahaa dadka macdanta qoda oo ay Booliisku rasaas ooda uga qaadeen xili dadkaasi ay ku jireen banaanbax nabadeed oo ay dhulka fadhiyeen.
Moses Dlamini oo ah afhayeen u hadley laanta Booliiska madaxbanaan ee dambiyada baara wuxuu sheegay in dhimashada Mr Macia ay ka dambeysay dhaawacyo xaga madaxa oo soo gaarey, iyadoo dhiig uu gudaha ugu furmay madaxiisa.
“Way garaaceen, way dileen si xub oo bini’aadamtinimada ka baxsan ayay u garaaceen” ayuu yiri mid ka mid ah maxaabiista ku jirtey xabsigii Mr Macia la keenay ee uu ku dhintey laba saac ka dib xarigiisa.
Link-ga Hoose ka daawo Video ninkan dhintey oo si xun loo diley ka dibna baabuur lagu jiiday.